Ihe omume - International Writing Centers Association
Writlọ Ọrụ Na-ede Akwụkwọ Ọgụgụ Mba na-eme ihe omume anọ kwa afọ iji jikọọ ndị òtù anyị ma mee ka ndị ọkà mmụta na ndị ọkachamara na-ede akwụkwọ.
Nzukọ Kwa Afọ (ọdịda ọ bụla)
Nzukọ ọdịda anyị bụ ihe omume kachasị ukwuu nke afọ na ndị bịara 600-1000 + na-esonye n'ọtụtụ narị ngosi, ebe obibi, na okpokoro okirikiri maka mmemme ụbọchị atọ. Nzukọ a na-eme kwa afọ bụ nnọkọ nnabata maka ndị nkuzi na ndị odeakwụkwọ nwere ọgụgụ isi ọhụụ, ndị gụrụ akwụkwọ, na ndị ọkachamara. Ebe a.
Summer Institute (oge okpomọkụ ọ bụla)
Summerlọ Ọrụ Ezumike anyị bụ izu ụka kpụ ọkụ n'ọnụ maka izu maka ndị ọkachamara na-ede akwụkwọ 45 ka ha rụọ ọrụ na ndị ọkachamara / ndị isi ederede mara ọkwa 5-7. The Summer Institute bụ nnukwu mmalite maka ndị isi ụlọ ọrụ ederede ọhụụ.
International Writing Centers Week (Kwa February)
The IWC Izu malitere na 2006 dị ka ụzọ isi mee ka ọrụ ụlọ ọrụ ederede (na mmasị) pụta ìhè. A na-eme ya kwa afọ gburugburu ụbọchị Valentine.
Njikọ Aka @ CCCC (oge opupu ihe ubi)
Onye na-emekọrịta ihe n'otu ụbọchị bụ mkparịta ụka kwa afọ nke Wednesde na-eme tupu CCCC (Nzukọ na -akụ na kọleji na nkwukọrịta) ga-ebido. Ihe dị ka ndị sonyere 100 họrọ site na otu oge n'otu isi okwu ederede. A na-agba ndị na-eme ihe nkiri na ndị bịara ya ka ha jiri Aka na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nweta nzaghachi na mmụọ nsọ na ọrụ ndị a na-arụ ọrụ.
Chọrọ iru ndị bịara anyị na ndị otu? Na-akwado ihe omume!
Wantchọrọ ịkwado ihe omume IWCA n'ọdịnihu? Lee anya anyị ihe omume oche ndu.